Ihe nkiri James Bond ugbu a na-akwalite ọchịchọ njem nlegharị anya Jamaica na UK
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Ihe nkiri James Bond ugbu a na-akwalite ọchịchọ njem nlegharị anya Jamaica na UK
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Entertainment • fim • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Onye na-ahụ maka njem nlegharị anya, Donovan White (2nd l) na-ekenye oge na ndị isi ụlọ ọrụ ụwa Amadeus, onye isi oche, Tom Starr (l) na Director, Alex Rayner (c); JTB Regional Director nke UK na Northern Europe, Elizabeth Fox (2nd r) na Delano Seiveright, Senior Advisor & Strategist na Ministry of Tourism, na World Travel Market na London, England, na Wednesday, November 3.
Ndị isi ụlọ ọrụ nke Amadeus, ụlọ ọrụ teknụzụ njem zuru ụwa ọnụ nke Europe, taa gwara ndị isi na-ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica na mwepụta Septemba 30 nke ihe nkiri James Bond kachasị ọhụrụ, No Time to Die, nke nwere ọtụtụ ihe nkiri na Jamaica, na-enyere aka n'ịkwalite mmasị na ya. ebe aga Jamaica, ọkachasị na United Kingdom.
Ndị isi Amadeus kwuru na ha na-ahụ nnukwu ọchụchọ na ntinye mmasị na ọchịchọ maka ebe Jamaica.
Ministri nke njem nlegharị anya na omenaala na JAMPRO rụrụ ọrụ na-eduga n'inye ngwa ngwa, mmekọrịta ọha na eze na ịre ahịa maka ihe nkiri Bond ọhụrụ.
Jamaica bụ ụlọ ime mmụọ nke Bond, ebe Ian Fleming na-ede akwụkwọ akụkọ Bond n'ụlọ ya, "Goldeye."
Ọ dịghị oge ịnwụ anwụ yiri ka ọ dị njikere ịfefe Avengers: Ọgwụgwụ egwuregwu na UK, na-ewere ọnọdụ nke ise na listi ewepụtara igbe igbe kacha akwụ ụgwọ oge niile site na Marvel's superhero blockbuster.
Tom Starr na Alex Rayner, onye osote onye isi oche na onye ntụzi aka na Amadeus nyere nkọwa nkenke a n'otu n'otu, n'ahịa njem njem ụwa na London, England. Teknụzụ na ngwọta Amadeus na-eje ozi dị ka ọkpụkpụ azụ na ike ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, gụnyere ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụgbọ oloko, igwe ọchụchọ, ụlọ ọrụ njem na ọrụ njem. Ndị isi Amadeus kwuru na ha na-ahụ nnukwu nchọta na ntinye akwụkwọ mmasị na ihe achọrọ Ebe Jamaica na United Kingdom ma kwuo na ọ bụ ọrụ nke Ministry of Tourism na ụlọ ọrụ ya bụ Jamaica Tourist Board (JTB) na ndị mmekọ isi n'ahịa yana ihe nkiri James Bond ọhụrụ.
Jamaica bụ ụlọ ime mmụọ nke Bond, ebe Ian Fleming na-ede akwụkwọ akụkọ Bond n'ụlọ ya, "Goldeye." Ihe nkiri Bond Dr. No na Live na Let Die ka e mekwara ihe nkiri ebe a. Maka oge ọ bụla ịnwụ anwụ, ndị na-ese fim rụrụ ụlọ ezumike ezumike Bond na San San Beach na Port Antonio. Ihe nkiri ndị ọzọ emere na Jamaica gụnyere nnọkọ ya na enyi ya Felix na izute 007 ọhụrụ, Nomi. Jamaica na-ejikwa okpukpu abụọ maka ihe nkiri Cuba dị na mpụta.
Jamaica n'ọnwa a ga-amalite ịnata opekata mpe ụgbọ elu 16 kwa izu site na United Kingdom, na-eweghachi agwaetiti ahụ azụ ihe dịka 100 ikike oche ụgbọ elu ka ọnụọgụ njem na-alọghachi. TUI, British Airways na Virgin Atlantic na-enye ndị anaghị akwụsị akwụsị ụgbọ elu n'etiti UK obodo nke London, Manchester, Birmingham na Jamaica.
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Edmund Bartlett na-edu otu ndị otu ọkwa dị elu sitere na Ministry of Tourism na JTB na World Travel Market, otu n'ime ihe ngosi ahia njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na ụwa. Bartlett sonyeere onye isi oche JTB, John Lynch; Onye nduzi nke njem nlegharị anya, Donovan White; Senior Advisor & Strategist, Ministry of Tourism, Delano Seiveright; na JTB Regional Director nke UK na Northern Europe, Elizabeth Fox.